Zimbabwe Plans Tourist 'Disneyland' - allAfrica.com
The announcement by Tourism Minister Walter Mzembi that Zimbabwe is planning to develop a theme park in Victoria Fall is a "step in the right direction".
Zimbabwe: Attack on Vic Falls Disneyland Plan Unfortunate
New Zimbabwe, 29 August 2013
THE recent announcement by the tourism minister Walter Mzembi that Zimbabwe is planning to develop a theme park in Victoria Fall is a step in the right direction. In an era where… Read more »
Zimbabwe: Hello and Welcome to Disneyland Zimbabwe!
Daily Maverick, 29 August 2013
This week, Zimbabwe's tourism minister Walter Mzembi announced plans to build a $300-million entertainment complex, which he described as "Disneyland in Africa". Read more »
Zimbabwe: 'Disneyland in Africa' Set for Victoria Falls
New Zimbabwe, 25 August 2013
THE government is planning to set up a US$300-million theme park in Victoria Falls to exploit full potential of the resort town. Read more »